Vebato reCCC Vopembedzwa neKubatana neVamwe paZuva reKuzvitonga Kuzere, Ukuwo Zanu PF Ichiti Bato iri Ndiro Rakakoka Zvirango
Kubvumbi 21, 2022
Nhengo dzeCCC dzakaenda kumhemberero dzekuzvitonga kuzere mumatunhu ose emunyika.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti danho rakatorwa nebato idzva rezvematongerwo enyika reCitizens’ Coalition for Change rekuenda kumhemberero dzekuzvitonga kuzere dzakaitwa neMuvhuro svondo rino kuBulawayo chinhu chakanaka chose sezvo chichiratidza kuti bato rinopikisa iri rinokoshesa rusungunguko rwakauyiswa nekudeurwa kweropa.
Nhengo dzebato iri dzakabatana nevamwe vana veZimbabwe mumatunhu ose emunyika pakuungana vachicherechedza kusvitsa makore makumi mana nemaviri nyika yawana kuzvitonga.
Iyi ishanduko huru kwazvo kubva kune zvaiitwa nenhengo idzi dzichiri pasi pebato reMDC Alliance, iro rakanga risingaendi kumhembero idzi richiti rusununguko harwuna zvarwuchareva nekuda kwekwaraiti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nebato riri kutonga reZanu PF.
Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reCCC, VaJacob Mafume, vanoti hapana munhu ane nharo nerusununguko, asi chavane nharo nacho kuparadzwa kwavanoti kuri kuitwa nyika nebato riri kutonga reZanu PF, iyo vanoti iri kuita kuzvambarara parusununguko rwevanhu.
VaMafume vanoti nekuda kwekusatonga zvakanaka kweZanu PF, vana veZimbabwe vave kubuda munyika vachinopondwa kunze sezvakaitika kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa kuSouth Africa, VaElvis Nyathi.
Asi mumwe mushandi weZanu PF vachiongorora zvematongerwo enyika, VaGadzira Chirumhanzu, vanoti vanotenda kuti bato idvza iri riri kucherechedza kuti kune rusununguko, asi vanoti kuenda kwenhengo dzeCCC kumhemberero hakuna zvakunoshandura.
VaChirumhanzu vanoti kunyange hazvo bato iri rave nerimwe zita idzva rekuti Citizens' Coalition for Change, vana veZibabwe havazofi vakariregerera nekwavanoti kukoka zvirango kwavanoti rakaita richiri kunzi MDC.